सन् २०१८ मा बलिउड कुन फिल्म कहिले ? - Naya Patrika
सन् २०१८ मा बलिउड कुन फिल्म कहिले ?
काठमाडाैँ | पुष १८, २०७४
सन् २०१८ मा बलिउडका एकसे एक सेलिब्रेटीका फिल्म मात्र होइन, सेलिब्रेटी सन्ततिका फिल्म पनि दर्शकले हेर्न पाउनेछन् । सन् २०१८ मा अक्षयकुमार, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण, वरुण धवन, प्रियंका चोपडाजस्ता चर्चित सेलेब्रिटीका फिल्म त रिलिज हुँदै छन् । साथमा श्रीदेवीकी छोरी जाह्नवी तथा सैफअलीकी छोरीको फिल्म पनि हलमा आउनेछन् । भारतीय सञ्चार माध्यमले सन् २०१८ मा रिलिज मिति तोकिसकिएका केही फिल्मबारे उल्लेख गरेका छन् :
सोनु के टिटुकी स्विटी
लब रन्जनले निर्देशन गरेको ‘सोनु के टिटुके स्विटी’ १२ जनवरीमा रिलिज हुँदै छ । प्रेमकथानक फिल्ममा कार्तिक आर्यन, नुसरत बसुचा र सनी सिंह मुख्य भूमिकामा छन् । कमेडी पन्चहरू प्रचुर मात्रामा मिलाइएको बताइने सोनु के टिटुकी स्विटी कम बजेटको फिल्म हो ।
अक्षय बर्माको निर्देशनमा बनेको ‘कालाकान्डी’मा सैफअली खान, सोभिता धुलिपला, अमायरा दस्तुर, कुणाल राय कपुर र इशान तलवार मुख्य भूमिकामा छन् । फिल्म १२ जनवरीमा रिलिज हुँदै छ । ब्ल्याक कमेडी फिल्मका रूपमा प्रचार गरिएको कालाकान्डीले आफ्नो करिअरलाई नयाँ मोडमा लग्ने दाबी अभिनेता सैफको छ ।
अनुराग कश्यपको निर्देशनमा बनेको स्पोर्ट ड्रामा फिल्म ‘मुक्काबाज’ र ‘सोनु के टिटुकी स्विटी’ र ‘कालाकान्डी’सँगै १२ जनवरीमा प्रदर्शन हुने तयारीमा छ । विनीतकुमार सिंह, जोया हुसेन, रवि किशन, साधना सिंहलगायतका कलाकारले अभिनय गरेको मुक्काबाज कम बजेटको फिल्म हो ।
विक्रम भट्टले निर्माण गरेको हरर फिल्म ‘१९२१’ पनि जनवरी १२ मै प्रदर्शन हुने तयारीमा छ । फिल्ममा जरिन खान र करण कुन्द्रा मुख्य भूमिकामा छन् । पछिल्लो दशकमा कम बजेटका फिल्म बनाइरहेका विक्रम यो फिल्म पनि दर्शकले मन पराउने दाबी गर्छन् । १९२१ हरर फिल्मको चौथो सिरिज हो ।
‘निर्दाेष’ नामक फिल्मचाहिँ १९ जनवरीमा प्रदर्शन हुनेछ । प्रदीप रंगवानी र सुब्रोतो पलले निर्देशन गरेको फिल्ममा अरबाज खान, मञ्जरी फडनीस, अश्मित पटेल, महक चहललगायतले अभिनय गरेका छन् । निर्दाेषलाई पारिवारिक विषयको फिल्म भनिएको छ ।
एस शंकर निर्देशित फिल्म ‘२.०’ जनवरी २५ मा रिलिज हुँदै छ । दक्षिण भारतीय सुपरस्टार रजनीकान्त, बलिउडका अक्षयकुमार, एमी ज्याक्सनलगायतले अभिनय गरेको २.०लाई अहिलेसम्मकै महँगो फिल्म भनिएको छ । बिहीबारै रिलिज गर्न लागिएको फिल्ममा साढे चार सय करोड भारु लगानी लागेको बताइने गरिएको छ । रोबर्टको सिक्वेल यो फिल्म पहिला अप्रिलमा रिलिज हुने बताइएको थियो । तर, अब जनवरी २५ मै रिलिज हुँदै छ ।
निरज पाण्डेको निर्देशनमा बनेको ‘अयरी’ फिल्म पनि जनवरी २६ मै रिलिज हुँदै छ । सिद्धार्थ मल्होत्रा र मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिकामा रहेको यो फिल्मले रजनीकान्तको ‘२.०’ र अक्षयकुमारको ‘प्याडम्यान’को समाना गर्नुपर्नेछ । त्यसकारण फिल्म बक्सअफिसमा पछारिने पूर्वानुमान गरिएको छ ।
अक्षयकुमार अभिनीत ‘प्याडम्यान’ २६ जनवरीमा प्रदर्शन हुँदै छ । आर बाल्कीको निर्देशनमा बनेको फिल्ममा अक्षयका अलावा राधिका आप्टे, सोनम कपुर र अभिताभ बच्चनले अभिनय गरेका छन् । प्याडम्यान तमिलनाडुका समाजसेवी अरुणाचलाम मुरुगानान्थमको जीवनीमा आधारित बायोग्राफी फिल्म हो ।
अनुष्का शर्मा मुख्य भूमिकामा अभिनीत ‘परी’ फिल्म फेब्रुअरी ६ मा रिलिज हुँदै छ । प्रोसित रायको निर्देशनमा बनेको फिल्ममा अनुष्काका साथ परमव्रत चटर्जी छन् । अनुष्काको होम प्रोडक्सनमा बनेको फिल्ममा उनी आफैँ परीको भूमिकामा छिन् ।
रानी मुखर्जी अभिनीत फिल्म ‘हिच्की’ २३ फेब्रुअरीमा प्रदर्शन हुँदै छ । सिद्धार्थ पी मल्होत्राको निर्देशनमा बनेको हिच्की सन् २००८ को हलिउड फिल्म ‘फ्रन्ट अफ क्लास’बाट प्रभावित छ । फिल्मले आफ्नो करिअर चम्काउने दाबी रानीको छ ।
परमाणु– द स्टोरी अफ पोखरण
२३ फेब्रुअरीमा रिलिज हुने ‘परमाणु’ फिल्ममा जोन अब्राहम, डायना पेन्टी र बोमन इरानी मुख्य भूमिकामा छन् । अभिषेक शर्माको निर्देशनमा बनेको फिल्मले आफ्नो ओझेलमा परेको स्टारडम पुनः ब्युँताउने विश्वास अभिनेता जोनको छ ।
तरुण मनसुखानी निर्देशित ड्राइभ फिल्मले २ मार्चलाई प्रदर्शन तोकेको छ । प्रेमकथानक फिल्ममा सुशान्त सिंह राजपुत र ज्याक्लिन फर्नान्डिस मुख्य भूमिकामा छन् । फिल्म कम बजेटमै बनेको बताइने गरिएको छ ।
श्रीदेवी तथा बोनी कपुरकी छोरी जाह्नवी कपुरको डेब्यु फिल्म ‘धडक’ ६ जुलाईमा रिलिज हुनेछ । धडक सुपरहिट मराठी फिल्म ‘सैराट’को रिमेक हो । सशांक खेतानको निर्देशनमा बनेको फिल्ममा जाह्नवीका साथै शाहिद कपुरका भाइ इशान खट्टरले पनि डेब्यु गरेका छन् । निर्माणकै क्रममा चर्चामा रहेको धडक प्रेमकथानक फिल्म हो ।
‘अक्टुबर’ फिल्मले प्रदर्शन मिति भने १३ अप्रिललाई तोकेको छ । सुजित सरकार निर्देशक अक्टुबर सस्पेन्स कमेडी फिल्म भएको बताइन्छ । फिल्ममा वरुण धवन र बन्दिता सन्धु मुख्य भूमिकामा छन् ।
टाइगर श्राफ अभिनीत ‘बागी–२’ फिल्म अप्रिल २७ मा रिलिज हुनेछ । बागीको सफलतापछि निर्माण गरिएको बागी–२ अहमद खानले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा टाइगरका साथमा श्रद्धा कपुर मुख्य भूमिकामा छिन् ।
मर्णिकर्णिका–द क्विन अफ झासी
‘मर्णिकर्णिका–द क्विन अफ झासी’ पनि बागी–२ सँगै २७ अप्रिलमा रिलिज हुनेछ । कृषको निर्देशनमा बनेको फिल्ममा कंगना रनावट, अंकिता लोखन्डे र सोनु सुद मुख्य भूमिकामा छन् ।
आलिया भट्ट अभिनीत ‘राजी’ ११ मेमा प्रदर्शन हुनेछ । मेघना गुलजारले निर्देशन गरेको फिल्ममा आलियाका साथमा बिकी कौशल मुख्य भूमिकामा छन् । राजी प्रेमकथानक फिल्म हो ।
वीरे दी वेडिङ
‘वीरे दी वेडिङ’ १८ मेमा रिलिज हुनेछ । फिल्ममा करिना कपुर, सोनम कपुर र स्वराभास्कर मुख्य भूमिकामा छन् । सशांक घोषले निर्देशन गरेको फिल्म कमेडी जनराको भएको बताइन्छ ।
‘फन्ने खा’ १३ जुनमा रिलिज हुनेछ । अतुल मान्जारेकरको निर्देशमा बनेको फिल्ममा ऐश्वर्या राय, अनिल कपुर र राजकुमार राव मुख्य भूमिकामा छन् । फन्ने खा पारिवारिक कमेडी फिल्म हो ।
‘सुरमा’ २९ जुनमा रिलिज हुने तयारीमा छ । साद अलीको निर्देशनमा बनेको फिल्ममा दिलजित दोसाँझ, तापसी पन्नू र अंगल वेदी मुख्य भूमिकामा छन् ।
सन्दीप और पिंकी फरार प्रेमकथानक फिल्म
‘सन्दीप और पिंकी फरार’ ३ अगस्तमा रिलिज हुनेछ । अर्जुन कपुर र परिणीति चोपडा मुख्य भूमिकामा रहेको यो फिल्म दिवाकर बेनर्जीले निर्देशन गरेका हुन् । प्रेमकथाकन फिल्मको सुटिङ अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ ।
‘सुइ धागा’ नामक फिल्मको पनि प्रदर्शन मिति तोकिएको छ । शरत कटारियाको निर्देशनमा बनेको फिल्ममा वरुण धवन र अनुष्का शर्मा मुख्य भूमिकामा छन् । फिल्म २८ सेप्टेम्बरमा रिलिज हुनेछ।
#सन् २०१८ मा बलिउड फिल्म
व्यायामबारे केही भ्रम
अमेरिकामा म्युजिक फेस्टिभल सम्पन्न
करण र पूर्णले खोले लेकाली स्टुडियो